Arkiifiyadaha Barnaamijka - CasinoAdvisor.eu
1X2 Ciyaarta Casino
1X2 Gaming waa horumariye ciyaarta ee fiidiyowyada fiidiyowga iyo ciyaaraha miiska. Shirkadda waxaa la aasaasay 2003 waxayna ku taal UK. Maanta, horumariyahan ciyaartan wuxuu leeyahay heshiisyo tiro badan oo khadka tooska ah ee internetka ah. Ciyaarta 1X2 waa magac isla markaaba maskaxdaada ku soo celiya isboortiga, sidaas darteed soosaaraha ciyaartan wuxuu leeyahay cad… Continue reading 1X2 Ciyaarta Casino
Yggdrasil waa horumariye cayaaraha iswiidhishka oo sumcad aad u wanaagsan ku leh warshadaha casino ee khadka tooska ah. Astaantu waxay sameysaa ciyaaro tayo sare leh oo casri ah. Yggdrasil waxaa aasaasay 2012 qaar ka mid ah shaqaalihii hore ee NetEnt. Shirkaddu waxay ka tirsan tahay shirkadda Cherry AB ee dalka Iswiidan, oo leh qayb badan oo ka mid ah saamiyada. Goobaha fiidiyowga, mashiinnada miraha… Continue reading Yggdrasil Casino
WMS Williams Is-dhexgal Casino
Williams Interactive (WMS) waa shirkad Mareykan ah oo soo saarta mashiinada ciyaarta iyo boosaska internetka. Shirkaddu waxay ku taal Nevada. Soosaarahan mashiinka mishiinka ayaa ka tirsan Kooxda Ciyaaraha Sayniska. Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna wanaagsan ee soo saarayaasha boosaska iyo boosaska fiidyowga adduunka. Waxaad si dhib leh u heli doontaa casino dhulka ku dhisan oo that Continue reading WMS Williams Is-dhexgal Casino
Wazdan waa horumariye ciyaarta oo horay u soo saaray tiro badan oo ah mashiinno miro iyo fiidiyowyo fiidiyoow casri ah. Sidaa darteed diiradda koowaad waxay ku jirtaa berrinka fiidiyowga fiidiyowga. Si kastaba ha noqotee, Wazdan waxay sidoo kale soo saartay dhowr kulan oo miiska ciyaarta ah sida Blackjack, Roulette iyo Video Poker. Marka waxaad ka heli kartaa xulasho aad u kala duwan of Continue reading Wazdan Casino
Thunderkick waa horumariyaha ciyaarta ee aadka loo wado ee leh xiisaha ciyaaraha casino. Soo-saarehan ayaa tayada ka dhigaya tirada. Tan iyo aasaaskii Thunderkick, guulo waaweyn ayaa la gaadhay. Waxay cadeeyeen inay yihiin ciyaartoy u qalma warshadaha casino. Thunderkick ma sheegayo macluumaad badan marka la barbar dhigo bixiyeyaasha kale ee ciyaarta. Kani waa… Continue reading Thunderkick Casino
StakeLogic waa horumariye reer Holand ah oo ka shaqeeya software-ka khadka tooska ah ee laga helo khadka tooska ah, shirkaddu intaas kuma aysan sii fogaan intaas. Soosaarahan ciyaartan waxaa la aasaasay sanadkii 2015. Sababtoo ah shirkaddu muddo dheer ma aysan sii jirin, kala duwanaanshaha fiidiyowyada fiidiyowga iyo mishiinnada mishiinka weli wali uma weyna sida loo tartamayo warshadaha qamaarka. StakeLogic wuu can Continue reading Khamaarka StakeLogic
Sannadkii 2014, safarkii Red Tiger Gaming ayaa bilaabmay, isagoo soo saaray ciyaaro loogu talagalay casinos-ka Yurub iyo Aasiya. Waxay isla markiiba kor u qaadeen liistada horumarinta cayaaraha markii ay ahayd inay riixaan xuduudaha sawirada. Waa u qalantaa in la baadho ciyaaraha khamaarka ee Red Tiger. Ka sokow sawirada, kuwaas oo tayo wanaagsan leh, dhawaqa sidoo kale waafiican yahay! The… Continue reading Red Tiger Ciyaarta Casino
Real Time Ciyaarta Casino
Real Time Gaming sidoo kale mararka qaarkood waxaa loo soo gaabiyaa RTG. Astaantan ayaa si gaar ah caan ugu ah taxanaha dhabta ah. Tani waa xulasho ka mid ah cayaaraha ugu tayada sareeya leh jaakbotyada horusocodka ah. Real Time Gaming waxaa la aasaasay sanadkii 1998-dii ee dalka Mareykanka waxaana markii dambe hantiyay Hastings International BV Sanadkii 2007. Shirkaddu waa sidaas darteed… Continue reading Real Time Ciyaarta Casino
Quickspin waa ciyaartoy xiiso badan oo ka tirsan wershadaha casino ee khadka tooska ah, astaanta ayaa u soo saartay ciyaartoy muhiim ka ah warshadaha muddo gaaban. Shirkadda waxaa la aasaasay 2011 waxayna ku koreen xawaare xawli ah tan iyo markaas. Waxay hadda bilaabaysaa inay tartan adag la gasho ciyaartoy waaweyn in Continue reading Quickspin Casino
Ciyaarta Pragmat Casino
Ciyaaraha Pragmat-ka waxaa laga heli karaa casinos badan oo internetka ah maalmahan. Ciyaar Pragmat waxaa lagu aasaasay Panama, Koonfurta Ameerika waxayna inta badan diirada saareysaa bixinta ciyaaraha casino ee suuqa Mareykanka. Dhawaan uun ayay shirkaddu bilawday inay keento suuqa khamaarka yurubiyanka, halkaas oo ay caan ku noqdeen. Ciyaar Pragmat waa shirkad horumarisa… Continue reading Ciyaarta Pragmat Casino
Bogga ugu weyn » Software